Inona avy Ireo Andinin-teny Afaka Manampy Anao Hizaka ny Alahelonao?
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kambôdzianina Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lamba Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Norvezianina Nyungwe Nzema Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Saramaccan Sena Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa tzeltal Éwé
Be dia be ny torohevitra omen’ny olona momba an’izany, nefa tsy voatery hahasoa daholo izy ireny. Mety hiteny, ohatra, ny olona sasany hoe tsy mety ny mitomany na mampiseho be ny alahelonao. Ny hafa indray mety hampirisika hoe aza kobonina ny alahelonao fa asehoy daholo. Manampy antsika hahay handanjalanja anefa ny Baiboly, ary hitan’ny manam-pahaizana fa azo ampiharina ny torohevitra ao.
Heverina hoe tsy tena lehilahy izay lehilahy mitomany, amin’ny kolontsaina sasany. Mahamenatra tokoa ve ny mitomany, indrindra raha eny imason’olona? Milaza ny manam-pahaizana momba ny aretin-tsaina fa ara-dalàna ny mitomany rehefa misy zavatra mampalahelo anao. Mety hanampy anao hionona sy hanohy ny fiainanao indray ny mitomany, rehefa malahelo be ianao. Vao mainka kosa ianao hijaly raha koboninao ny alahelonao. Tsy milaza mihitsy ny Baiboly hoe tsy mety ny mitomany rehefa idonam-pahoriana, na koa hoe tsy tena lehilahy izay lehilahy mitomany. I Jesosy aza nitomany rehefa maty i Lazarosy, nefa izy nanana hery hananganana ny maty.—Jaona 11:33-35.
Matetika no tezitra be ny olona rehefa malahelo, indrindra raha tampoka sy tsy nampoizina ilay fahafatesana. Betsaka ny antony mahatonga ny olona nidonam-pahoriana ho tezitra, ohatra hoe niteniteny foana na nanao teny tsy voahevitra taminy ny havany na ny namany. Hoy i Mike, any Afrika Atsimo: “Vao 14 taona aho, dia maty dadanay. Nilaza ilay mpitondra fivavahana anglikanina tamin’ny fandevenana, fa mila olona tsara fanahy, hono, Andriamanitra, dia izany no mahatonga azy haka an’ilay olona aloha be. * Tezitra be aho rehefa naheno an’izany, satria izahay tena mbola nila an’ny dadanay. Mbola malahelo foana aho, 63 taona atỳ aoriana.”
Ary ahoana raha manamelo-tena ianao? Raha tampoka be ny nahafatesan’ilay olona, dia mety hieritreritra ilay nidonam-pahoriana hoe: ‘Mety ho tsy nisy izao raha mba nanao an’izao sy izao aho.’ Nifamaly koa angamba izy sy ilay olona maty tamin’izy ireo niresaka farany, ka vao mainka manamelo-tena be izy.
Be dia be no tezitra na manamelo-tena hoatr’izany rehefa idonam-pahoriana. Inona àry no azonao atao raha hoatr’izany koa no tsapanao? Tsy tokony hokoboninao samirery izany. Resaho amin’ny namanao ilay izy. Azo antoka fa hihaino sy hampahery anao izy. Hoy mantsy ny Baiboly: “Tia amin’ny fotoana rehetra ny tena namana, sady toy ny rahalahy natao hanampy amin’ny fotoam-pahoriana.”—Ohabolana 17:17.
I Jehovah Andriamanitra Mpamorona antsika no namana tsara indrindra, raha nidonam-pahoriana ianao. Resaho aminy izay ao am-ponao, satria ‘miahy anao izy.’ (1 Petera 5:7) Efa nampanantena koa Andriamanitra fa ho tony sy hilamin-tsaina izay mamboraka aminy ny ao am-pony. Homeny ‘fiadanana, izay lehibe lavitra noho ny eritreritra rehetra’, mantsy izy ireo. (Filipianina 4:6, 7) Avelao hampionona anao amin’ny alalan’ny Teniny koa Andriamanitra. Ataovy lisitra izay andinin-teny mampahery anao. (Jereo ilay efajoro ao amin’ny pejy 5.) Azonao atao tsianjery mihitsy aza ny sasany amin’izy ireny. Mety hanampy anao ny misaintsaina azy ireny, indrindra fa rehefa irery ianao na tsy mety mahita tory.—Isaia 57:15.
Efapolo taona i Jack, ary vao haingana no matin’ny kansera ny vadiny. Tena mahatsiaro ho irery izy indraindray, nefa hitany hoe manampy azy ny vavaka. Hoy izy: “Tsy mahatsiaro ho irery mihitsy aho rehefa mivavaka amin’i Jehovah. Taitra foana aho amin’ny alina dia tsy mety mahita tory intsony. Mamaky sy misaintsaina andininy ao amin’ny Soratra Masina anefa aho, dia mamboraka ny ato am-poko amin’i Jehovah. Lasa milamin-tsaina sy mahatsiaro ho maivamaivana aho avy eo, dia mahita tory indray.”
Narary ny maman’ny ankizivavy iray atao hoe Vanessa, dia maty. Tsapany koa hoe tena nanampy azy ny vavaka. Hoy izy: “Niantso ny anaran’Andriamanitra aho sady nitomany rehefa ilay nalahelo be iny. Nihaino ahy foana izy rehefa nivavaka aho, sady nanome ahy an’izay hery nilaiko.”
Misy mpanoro hevitra olona nidonam-pahoriana milaza fa tsara koa ny manao asa soa ho an’ny fiaraha-monina. Ho falifaly ireo nidonam-pahoriana raha manao an’izany, ka tsy halahelo be intsony. (Asan’ny Apostoly 20:35) Be dia be ny Kristianina nahatsapa fa tena nampionona azy ireo ny nanampy olona.—2 Korintianina 1:3, 4.
^ feh. 5 Tsy mampianatra an’izany ny Baiboly. Voalaza ao ny antony telo mahatonga ny olona ho faty.—Mpitoriteny 9:11; Jaona 8:44; Romanina 5:12.
Fantatr’Andriamanitra ny mahazo anao.—Salamo 55:22; 1 Petera 5:7.
Mihaino tsara ny vavaka ataon’ny mpanompony Andriamanitra.—Salamo 86:5; 1 Tesalonianina 5:17.
Malahelo an’ireo olona efa maty Andriamanitra.—Joba 14:13-15.
Mampanantena Andriamanitra fa hatsangany ny maty.—Isaia 26:19; Jaona 5:28, 29.
Tsy voatery ho fantatsika ny zavatra tena ilain’ny olona nidonam-pahoriana, na dia namantsika be aza izy.